समाचार - Zirconia ब्लक के हो?
Zirconia ब्लक सामग्री र धातु सामाग्री: हामी सबै जान्दछौं कि त्यहाँ दन्त पुनर्स्थापना को लागी तीन प्रकार को सामग्री को उपयोग गरीन्छ। Zirconium अक्साइड monoclinic, tetragonal र घन क्रिस्टल रूपहरु को रूप मा हुन्छ। घने sintered भागहरु घन र/वा tetragonal क्रिस्टल रूपहरु को रूप मा निर्मित गर्न सकिन्छ। क्रम मा यी क्रिस्टल संरचनाहरु लाई स्थिर गर्न को लागी, म्याग्नेशियम अक्साइड (MgO) वा yttrium अक्साइड (Y2O3) को रूप मा स्टेबलाइजर ZrO2 मा थप्न को लागी आवश्यक छ।
किन zirconia ब्लक दन्त मा सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादन हो पुनर्स्थापना?
Zirconia को गठन को रूप मा कुरा गरौं। दन्त zirconia ब्लक zirconium को क्रिस्टलीय अक्साइड रूप बाट बनेको छ, र यो क्रिस्टल मा एक धातु परमाणु हुन्छ तर एक धातु मानीदैन। यसको टिकाऊ र biocompatible गुणहरु को कारण, सर्जन वा डाक्टरहरु विभिन्न कृत्रिम अंगहरुमा दन्त zirconia ब्लक को उपयोग। यो प्रत्यारोपण मा प्रयोग गरीन्छ किनकि यो सबैभन्दा बलियो सामाग्री मानिन्छ।
जे होस् धेरै उत्पादनहरु दन्त उद्योग मा प्रयोग गरीन्छ, दन्त zirconia ब्लक पनि सिरेमिक ब्लक भनिन्छ दन्त चिकित्सक र बिरामीहरु बीच सबैभन्दा प्रसिद्ध छ।
दन्त zirconia ब्लक को लागी केहि फाइदाहरु:
-यो उच्च प्रविधिको विकास को उपयोग गरी निर्माण गरीएको छ। उच्च फ्रैक्चर क्रूरता संग, कास्ट फलाम को समान थर्मल विस्तार, धेरै उच्च झुकने शक्ति र तन्य शक्ति, लगाउन को लागी उच्च प्रतिरोध र जंग, कम थर्मल चालकता
- साथै, यो राष्ट्रिय एजेन्सीहरु द्वारा अनुमोदित छ। साथै, यी ब्लकहरु केहि शुद्धता परीक्षण गुज्रिएको छ, यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यो प्रयोग गर्न को लागी पूरी तरह सुरक्षित छ।
EntalDental zirconia ब्लक एक उच्च गुणस्तरीय उत्पादन हो, र यो पनि दाँत अधिक टिकाऊ र प्राकृतिक बनाउँछ।
Nce एक पटक उत्पादन रोगी भित्र रोपिएको छ, यो उत्पादन को लागी एक राम्रो शेल्फ जीवन दिनेछ।
This यो दन्त zirconia ब्लक को अन्य महत्वपूर्ण लाभहरु यो पूर्व सुखाने समय कम र रंगाई समय को दौरान दृश्य छाप सुधार हुनेछ।
यो उत्पादन को importantThe सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरु यो कुनै पनि प्राकृतिक रंग reappearance अधिकारी हुन सक्छ, र यो पनि कुनै पनि आकार र आकार मेल गर्न सक्छ।
पोस्ट समय: जुलाई-17-2021